देशमाथि मडारीएको कालो बादलसँग सामना गर्न एकजुट हुनैपर्ने छ! « Media for all across the globe
नेपालमा बिभिन्न शक्तिराष्ट्रहरुको गिद्धे नजर परिरहेको छ। सरकारमा संचालन गरिरहेको पार्टी र नेतृत्वपंक्तीमा महिनौंसम्म भागबन्डाको बार्गेनिङमा किचलो भैरहेको छ। अर्को तर्फ विश्वका शक्तिमान देशहरुसँगै हाम्रो देश पनि कोरोना महामारीको चपेटामा छ। देशमा महिनौंदेखि लकडाउनको कडा सामना गर्दागर्दै बाध्यताले सैयौंको संख्यामा आत्महत्या गर्न पुगेको अबस्था पनि उतिकै छ।
देशमाः को राष्ट्रबादी, को राष्ट्रघाती भन्दै आपसमा बहस चलाए झैं गरी छिमेकी राष्ट्रको भक्ती भावनालाई बढवा दिन पुगेका माहामहिमहरु कहिले जुटे झैं, त कहिले फुटे झैं गर्छन्। उनीहरु जुन तरिकाले होस् प्रभुको शरणमा पुग्ने होडबाजी मै ब्यस्त भएको देख्न सकिन्छ।
देश र जनताको हितको पक्षमा कहिले पनि यो सरकार नभएको त नेपाली जनतालाई थाहा नभएको विषय होइन। तरपनि देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेका नेता र सरकारको यो पीपलपाते नीतिले गर्दा देश बर्बादी तिर खस्कीरहेको अबस्था छ। कहिले दक्षिणमुखी त कहिले उत्तरमुखी त – कहिले पश्चिममुखी आस्रीत हुँदै गर्दा देशको अस्तित्व मै खतराको घन्टी बज्दै गरेको संकेत दिइरहेको छ।
सहयोगी मुलुकहरुले पनि खाए–खाँ ः नखाए घीच भन्दै सहयोगको भावनामार्फत देश भित्रने दाउमा जबरजस्ती गर्दै गरेको अबस्था छ।
देशको पावर सेन्टर ध्वस्त पारे पस्चात त शक्ती राष्ट्रहरुको ढुक्कसँग नेपाललाई सामरिक अखडा बनाउन सक्ने सोंचमा भएको पाइन्छ। सके बैधानिक कानूनी तरीकाले भित्रिने, नभए देशमा बिभिन्न तरिकाबाट धार्मिक, जातीय द्वन्द्वको माध्यमबाट बितन्डता फैलाएर देशमा एऊटा ठूलो द्वन्द्वमा फसाएर देशको माहौल अस्तब्यस्त बनाएर भएपनि नेपाललाई फेरि नेपाललाई युद्ध मैदानमा बदल्न सफल हुने कोसिसमा देखिन्छन्।
एमसीसीको पहिलो चरणमा तोकिएको समयमा पास नहुंदा कहिले त भारतमा मुस्लिम समुदायको माध्यमबाट नेपाली झण्डा जलाइयो। नेपालमै तीन ठाउँमा गाई काटियो, नेपालमै नेपालको झण्डा जलाइयो नेपालीहरु बीचमै द्वन्द्वको सृजना गरींदैछ। पछिल्लो समयमा सरकार र सरकार संचालन पार्टी, राप्रपा कमल थापाको पार्टी प्रतीपक्ष दल सबै एमसीसीको पक्षमा उभिदै गरेको पाइन्छ। पहिले एमसीसीका केही बुँदाहरु संसोधन गर्ने प्रस्ताब राख्दा अमेरीकी एमसीसीको तर्फबाट कमा र पुलीस्टापसम्म फेरबदल हुन नसक्ने भन्ने दावा अहिले किन बदलिएर आयो। सहयोग पनि खाने भए खाँँ नखाने भए घीच भन्ने तरीकाले दिइन्छ भने हामी हामी नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने।
कुनै समय १८ घन्टा लोडसेडिङ खपेको देशका जनताले कुलमान घिसिङको अगुवाइमा देशमा उज्यालो छाएको हुंदा पुनः अबत्रि थपियोस् अझैं धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्दै तीन करोड नेपालीहरुले आवाज ऊठाऊंदै गर्दा जनताको भलाई, जनता हितमा जनताका आबस्यकता अनुसार काम गर्न भनी जनता कै माध्यमबाट सरकारमा पुगेका महामहिमहरुको अबस्था हेर्दा एमसीसी संसदबाट पास गगरि अमेरिकालाई जिम्मा नलगाऊंलान भनी हामी नेपाली जनता ले कसरी विस्वास गर्न सकिन्छ?
एमसीसी पास गर्नु भनेको नेपाल र नेपाली जनताको लागी मृत्युदण्ड दिनु भन्दा अगाडी मासुभात खान दिए जस्तै हो। एमसीसीको बिरोधमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सँपुर्ण नेपालीहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द पार्दै देश बचाऊंंने शक्तिहरुसँग एक्यबद्धता जाहेर गर्दै अघी बढ्न अखिल भारत प्रबासी नेपाली संघ आग्रह गर्दछ!